New Contraceptive Methods - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မိနျးကလေးဘဝမှာ ရှေးခယျြစရာတှေ အလှနျမြားပွားပါတယျ။ တဈကိုယျရေ လစဉျသုံးပစ်စညျးကအစ အဝတျအထညျ၊ အလှကုနျအဆုံးကိုယျနဲ့အဆငျပွရောကို ရှေးခယျြကွ ရပါတယျ။ အိမျထောငျကလြာတဲ့အခါကွတော့လညျး မိမိနဲ့အဆငျပွတေဲ့ ကိုယျဝနျတားနညျးတှကေို ဆရာဝနျနဲ့ဖွဈစေ ဆှမြေိုးသူငယျခငျြးမြားနှငျ့ဖွဈစေ တိုငျပငျရှေးခယျြကွရပါသေးတယျ။
ရှေးခယျြတဲ့နရောမှာ မိမိအနနေဲ့ ကိုယျဝနျတားနညျး စုံစုံလငျလငျ သိထားတော့ ရှေး ခယျြရာမှာ ပိုအဆငျပွမှောမို့ ခတျေပျေါကိုယျဝနျတားနညျးအသဈမြားကိုဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ရတေိုတားမှာလား? ရရှေညျတားမှာလား အရငျစဉျးစားပါ။
သောကျဆေးတှမှောတော့ တဈလတဈခါ ရာသီလာစပေါတယျ။ ဆေးရပျလြှငျရပျခွငျး ကလေးရနိုငျပါတယျ။ ဆေးအနနေဲ့ကတော့… Marvellon 28; Lydia; Microgynon; Ok pill; စိတျခြ စတဲ့နာမညျတှနေဲ့ အလှယျတကူဝယျယူနိုငျပါတယျ။ နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျတော့ Exluton နာမညျနဲ့ဝယျယူနိုငျပါတယျ။
၃လဆေးလို့ လူသိမြားကွပါတယျ။ ရာသီမလာတတျပါဘူး။ ဆေးဖွတျပွီးအတနျကွာမှ ကလေးရတာမြိုး ရှိနိုငျပါတယျ။
၃) မိနျးမကိုယျထဲထညျ့ရတဲ့ကှငျး( Vaginal Ring)
မိနျးမကိုယျထဲထညျ့ရတဲ့ ကှငျးအပြော့လေးပါ။ တဈလတဈခါ ထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ ကိုယျဝနျရတာကိုတားဆီးပေးပါတယျ။ ဒါကိုထညျ့ထားပေးရငျ ရာသီပုံမှနျလာတယျဆိုပမေယျ့ Vaginal Ring အသှငျးအထုတျကိုတော့ မိမိဘာသာပွုလုပျရမှာဖွဈပါတယျ
၄) ကိုယျဝနျတားနိုငျသော အာနိသငျရှိကပျခှာလေးမြား ( Contraceptive Patch)
သူကတော့ ကိုယျခန်တာမှာကပျလို့ရတဲ့ ကပျခှာအသေးလေးတှပေါ။ ကပျခှာလေးတှမှောတော့ တားဆေးတှမှောပါလရှေိ့တဲ့ Oestrogen, Progestrone ပါဝငျပွီး ကိုယျဝနျတားပတေဲ့ အာနိသငျရ စပေါတယျ။ တားဆေး သောကျရငျဖွဈလရှေိ့တဲ့ ခေါငျးမူး၊ခေါငျးကိုကျတာတှတေော့ ခံစားရနိုငျ ခရြှေိပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆေးသောကျမမှေ့ာမပူရတော့သလို။ ဆေးထိုးသလို နာမှာလညျးမပူရတော့ပါဘူး။ ကပျခှာတဈခုကို တဈပတျခံလရှေိ့ပွီး တဈပတျတဈခါ ၃ပတျ ဆကျတိုကျကပျပေးရပါတယျ။ ၄ပတျမွောကျမှာောတ့ မကပျဘဲ ရာသီလာတာကို စောငျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ မရနိုငျသေးဘူးလို့ သိထားပါတယျ။
၅) သားအိမျခေါငျးဖုံး ဦးထုပျ (Diaphragm)
သားအိမျခေါငျးအဝမှာ ဦးထုတျလေးကဲ့သို့ အမြိုးသားသုတျပိုးဝငျခွငျးကိုတားဆီးပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ၉၄% ထိ ကိုယျဝနျတားနိုငျပါတယျ။
၆) သားအိမျတှငျးထညျ့ သားဆကျခွားနညျး( IUD)
နောကျပိုငျးနှဈတှမှော ဟျောမုနျးဘေးထှကျဆိုးကြိုး မခံစားခွငျသူတှေ သုံးကွတဲ့ပစ်စညျးလေးပါ။ ကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာဝနျက သားအိမျထဲ ပစ်စညျးလေးထညျ့ပေ့းထားမယျဆိုရငျ ၅နှဈမှ ၁၀နှဈထိ ကိုယျဝနျတားစတေဲ့ အာနိသငျပေးပါတယျ။
ဘေးထှကျဆိုးကြိုးအနနေဲ့တော့ ရာသီမြားတာမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။ ရာသီမြားတတျတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အတှကျတော့Progestrone Hormone ပါတဲ့ Mirena လို့ချေါတဲ့ IUD ကိုထညျ့လို့ရနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး ထညျ့နိုငျပါတယျ။
လကျမောငျးတှငျးကို ဟျောမုနျးပါတဲ့ အခြောငျးအပြော့လေးထညျ့ပေးတာဖွဈပါတယျ။ ၃နှဈတာရှညျခံတာရှိသလို ၅နှဈတာရှညျခံတာလညျးရှိပါတယျ။ ကြှမျးကငျြတဲ့ဆရာဝနျမှ လကျမောငျးအရပွေားအောကျသို့ ထုံဆေးထိုးပွီးထညျ့ပေးမှာဖွဈပါတယျ။ ရာသီ ပုံမှနျလာတာလညျးဖွဈနိုငျသလို ရာသီမလာတာလညျးဖွဈနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ လကျမောငျးတှငျးသားဆကျခွားနညျး လုပျဆောငျနိုငျပါတယျ။
ဒါဆို ခတျေမှီသူတိုငျးသိကွတဲ့ သားဆကျခွားနညျးလေးတှထေဲက ကိုယျနဲ့အဆငျပွတောရှေးခယျြနိုငျကွပါစေ။
မိန်းကလေးဘဝမှာ ရွေးချယ်စရာတွေ အလွန်များပြားပါတယ်။ တစ်ကိုယ်ရေ လစဉ်သုံးပစ္စည်းကအစ အဝတ်အထည်၊ အလှကုန်အဆုံးကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာကို ရွေးချယ်ကြ ရပါတယ်။ အိမ်ထောင်ကျလာတဲ့အခါကြတော့လည်း မိမိနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ဖြစ်စေ ဆွေမျိုးသူငယ်ချင်းများနှင့်ဖြစ်စေ တိုင်ပင်ရွေးချယ်ကြရပါသေးတယ်။
ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာ မိမိအနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်း စုံစုံလင်လင် သိထားတော့ ရွေး ချယ်ရာမှာ ပိုအဆင်ပြေမှာမို့ ခေတ်ပေါ်ကိုယ်ဝန်တားနည်းအသစ်များကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရေတိုတားမှာလား? ရေရှည်တားမှာလား အရင်စဉ်းစားပါ။
သောက်ဆေးတွေမှာတော့ တစ်လတစ်ခါ ရာသီလာစေပါတယ်။ ဆေးရပ်လျှင်ရပ်ခြင်း ကလေးရနိုင်ပါတယ်။ ဆေးအနေနဲ့ကတော့... Marvellon 28; Lydia; Microgynon; Ok pill; စိတ်ချ စတဲ့နာမည်တွေနဲ့ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက်တော့ Exluton နာမည်နဲ့ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
၃လဆေးလို့ လူသိများကြပါတယ်။ ရာသီမလာတတ်ပါဘူး။ ဆေးဖြတ်ပြီးအတန်ကြာမှ ကလေးရတာမျိုး ရှိနိုင်ပါတယ်။
၃) မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ရတဲ့ကွင်း( Vaginal Ring)
မိန်းမကိုယ်ထဲထည့်ရတဲ့ ကွင်းအပျော့လေးပါ။ တစ်လတစ်ခါ ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ဝန်ရတာကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါကိုထည့်ထားပေးရင် ရာသီပုံမှန်လာတယ်ဆိုပေမယ့် Vaginal Ring အသွင်းအထုတ်ကိုတော့ မိမိဘာသာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
၄) ကိုယ်ဝန်တားနိုင်သော အာနိသင်ရှိကပ်ခွာလေးများ ( Contraceptive Patch)
သူကတော့ ကိုယ်ခန္တာမှာကပ်လို့ရတဲ့ ကပ်ခွာအသေးလေးတွေပါ။ ကပ်ခွာလေးတွေမှာတော့ တားဆေးတွေမှာပါလေ့ရှိတဲ့ Oestrogen, Progestrone ပါဝင်ပြီး ကိုယ်ဝန်တားပေတဲ့ အာနိသင်ရ စေပါတယ်။ တားဆေး သောက်ရင်ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ခေါင်းမူး၊ခေါင်းကိုက်တာတွေတော့ ခံစားရနိုင် ချေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆေးသောက်မေ့မှာမပူရတော့သလို။ ဆေးထိုးသလို နာမှာလည်းမပူရတော့ပါဘူး။ ကပ်ခွာတစ်ခုကို တစ်ပတ်ခံလေ့ရှိပြီး တစ်ပတ်တစ်ခါ ၃ပတ် ဆက်တိုက်ကပ်ပေးရပါတယ်။ ၄ပတ်မြောက်မှာောတ့ မကပ်ဘဲ ရာသီလာတာကို စောင့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ မရနိုင်သေးဘူးလို့ သိထားပါတယ်။
၅) သားအိမ်ခေါင်းဖုံး ဦးထုပ် (Diaphragm)
သားအိမ်ခေါင်းအဝမှာ ဦးထုတ်လေးကဲ့သို့ အမျိုးသားသုတ်ပိုးဝင်ခြင်းကိုတားဆီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၉၄% ထိ ကိုယ်ဝန်တားနိုင်ပါတယ်။
၆) သားအိမ်တွင်းထည့် သားဆက်ခြားနည်း( IUD)
နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ဟော်မုန်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုး မခံစားခြင်သူတွေ သုံးကြတဲ့ပစ္စည်းလေးပါ။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်က သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းလေးထည့်ပေ့းထားမယ်ဆိုရင် ၅နှစ်မှ ၁၀နှစ်ထိ ကိုယ်ဝန်တားစေတဲ့ အာနိသင်ပေးပါတယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့တော့ ရာသီများတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီများတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အတွက်တော့Progestrone Hormone ပါတဲ့ Mirena လို့ခေါ်တဲ့ IUD ကိုထည့်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ထည့်နိုင်ပါတယ်။
လက်မောင်းတွင်းကို ဟော်မုန်းပါတဲ့ အချောင်းအပျော့လေးထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ၃နှစ်တာရှည်ခံတာရှိသလို ၅နှစ်တာရှည်ခံတာလည်းရှိပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်မှ လက်မောင်းအရေပြားအောက်သို့ ထုံဆေးထိုးပြီးထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီ ပုံမှန်လာတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို ရာသီမလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်မောင်းတွင်းသားဆက်ခြားနည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဆို ခေတ်မှီသူတိုင်းသိကြတဲ့ သားဆက်ခြားနည်းလေးတွေထဲက ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာရွေးချယ်နိုင်ကြပါစေ။
Dehydration in Children in Summer